WAR DEG DEG AH:Ciidamadii badnaa oo Gaalkacyo gaadhay & Hawlgalo ka bilaabmi raba – DMS
HomeWararkaWAR DEG DEG AH:Ciidamadii badnaa oo Gaalkacyo gaadhay & Hawlgalo ka bilaabmi raba
Wararka ka imaaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maanta gudaha magaaladaasi ay gaadheen ciidamo iyo gaadiid dagaal oo aad u tira badan, kuwaas oo uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada Puntland.
Ujeedka ciidamadani gaadhay Gaalkacyo ayaa lagu sheegay xoojinta iyo sugida amaanka magaalada Gaalkacyo, waxaana sidoo kale wararka qaarkood ay sheegayaan in ay hawlgalo lagu sugayo amaanka ay ciidamadani ka samayn doonaan magaalada Gaalkacyo.
Saraakiisha hogaaminaysa ciidamadani ayaa durbaba maanta ka bilaabay magaalada Gaalkacyo kulamo iyo shirar kala duwan oo ay la qaadanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana laga yaabaa in caawa xaalad bandow ah lagu soo rogo magaaladaasi Gaalkacyo.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni ayaa amar ku bixiyey in hawlgalo lagu sugayo amaanka ciidamadu ay ka bilaabaan magaalada Gaalkacyo isla markaasna gacanta lagu soo dhigo cidii ka dambaysay falkii kufsiga iyo dilka ahaa ee lagula kacay Caa’isha Ilyaas oo ahayd gabadh yar oo 12 jir ah oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo lana soo hor dhigay maydkeeda gurigooda oo ku yaala magaaladaasi Gaalkacyo.
Wixii kusoo kordha warkaasi kala soco WWW.DALMARMEDIA.NET
Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliye ay ka hayso